अनमोल केसी र प्रदीप खड्काबीच ‘स्टारडम’ लडाइँ :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा युवा पुस्ताको आगमन बढ्दो छ । नयाँ नायक नायिकाको क्रेज दर्शकमा धेरै देखिएको छ । एउटै चलचित्रबाट स्थापित र लोकप्रियताको शिखरमा पुग्ने नयाँ कलाकारको संख्या बढ्दै गएको छ । यिनैमध्येका एक हुन् अनमोल केसी । अनमोलले खेलेका एकपछि अर्को चलचित्र हिट भएका छन् । अनमोलले खेलेका ‘होस्टल’, ‘जेरी’, ‘गाजलु’, ‘ड्रिम्स’ ब्याक टु ब्याक हिट भएका छन् । ‘कृ’ का लागि अनमोलले २० लाख पारिश्रमिक लिएका थिए । जुन पारिश्रमिक नेपाली कलाकारले अहिलेसम्म लिएकोमध्ये धेरै हो । अनमोलले त्यति पारिश्रमिक लिएपछि नेपाली चलचित्रमा नयाँ नयाँ नायकको जन्म हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यसकै प्रभाव होला अहिले नेपाली रजतपटमा आयुष्मान देशराज र आशीरमान देशराज श्रेष्ठ दाजुभाइ, पल शाह, सलिनमान बानियालगायतले राम्रो सम्भावना देखाएका छन् ।
तर, अन्य नायकभन्दा पनि अहिले अनमोल केसी र प्रदीप खड्काबीच को ठूलो स्टार भन्ने लडाइँ सुरु भएको छ । अनमोलले ‘कृ’ चलचित्रका लागि लिएको २० लाखको कीर्तिमान भंग गर्दै प्रदीप खड्काले ‘लिली–बिली’ बाट २२ लाख रुपैयाँ लिएका छन् । जसले गर्दा धेरै पारिश्रमिक लिनेमा नायक प्रदीप खड्का परेका छन् । यसअघि प्रदीपले ‘प्रेमगीत’ चलचित्रमा तीन लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएको बताइन्छ । ‘प्रेमगीत’ चलेपछि उनले त्यसकै सिक्वेल ‘प्रेमगीत २’ मा सात लिएको बजार हल्ला छ ।
कसरी पाए प्रदीपले २२ लाख ?
प्रदीप खड्काअघि ‘लिली–बिली’ चलचित्र निर्माण पक्षले नायक अनमोल केसीलाई अफर गरेको बताइन्छ । चलचित्र निर्माण पक्षले अनमोलसँग ३० लाख पारिश्रमिक र ३० प्रतिशत नाफाको रकम दिने सहमति गरेको थियो । तर, त्यो सहमति भएको तीन दिनपछि अनमोलका बाबु भुवन केसीले छोराको ‘डिमान्ड’ धेरै भएको भन्दै निर्माण पक्षसँग नाफाको ४० प्रतिशत मागेका थिए । अनमोलले पनि ‘हेरौला’ भन्दै दुई तीन झुलाएको र भुवनले नाफाको ४० प्रतिशत मागेपछि सहमति भाँडिएको स्रोतले बतायो । अनमोल र भुवन अहिले अमेरिकामा छन् । अनमोल केसीले ३० लाख पारिश्रमिक र नाफाको ३० प्रतिशत रकम अस्वीकार गरेपछि ‘लिली–बिली’ चलचित्र युनिट निकै तनावमा परेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार त्यसपछि ‘लिली–बिली’ युनिट ‘प्रेमगीत’ स्टार प्रदीप खड्काकहाँ पुग्यो । प्रदीपले अभिनय गरेको ‘प्रेमगीत’ र ‘प्रेमगीत २’ दुवै हिट भएपछि ‘लिली–बिली’ का निर्माता गोविन्द शाही र निर्देशक मिलन चाम्सले प्रदीपलाई अफर गरेका थिए ।
सुरुमै प्रदीपले आफू अहिलेको सर्वाधिक चलेको नायक भएको भन्दै २२ लाख रुपैयाँ र विदेशमा प्रदर्शनको अधिकार पाउनुपर्ने सर्त अघि सारे । सोहीअनुसार निर्माण पक्ष प्रदीपलाई २२ लाख पारिश्रमिक र थाइल्यान्ड तथा म्यान्मारमा चलचित्र प्रदर्शनको अधिकार दिन राजी भएको बताइन्छ । ‘आफू अहिलेको चलेको स्टार भन्दै प्रदीप खड्काले २२ लाख पारिश्रमिक माग गरे,’ स्रोतले भन्यो । ‘लिली–बिली’ को अधिकांश सुटिङ युरोपमा हुने छ ।
स्रोतका अनुसार ‘लिली–बिली’ मा अभिनयका लागि प्रदीपले १० लाख अग्रिम पारिश्रमिकसमेत लगिसकेका छन् । मिलन चाम्सले निर्देशन गर्ने ‘लिली–बिली’ को छिट्टै राजधानीको पाँचतारे होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणा गरिने बुझिएको छ । ‘लिलीबिली’ मा नायिका शिल्पा मास्केको अभिनय रहने छ । चलचित्रका अर्का निर्माता सुदिप खड्का हुन् ।
‘लिली–बिली’ बारे विवाद
‘लिली–बिली’ चलचित्रमा सुरुमा अनमोल केसीलाई अफर गरेको र पारिश्रमिकमा कुरा नमिलेपछि उनले छाडेको भन्ने आशयको खबर फैलिएपछि प्रदीप खड्का असन्तुष्ट भएका छन् । उनले निर्देशक मिलन चाम्सलाई आफ्नो असन्तुष्टि बताइसकेका छन् । तर, निर्देशक मिलन चाम्सले भने ‘लिली–बिली’ प्रदीपलाई नै हेरेर स्क्रिप्ट लेखिएको जनाएका छन् । प्रदीपले पनि ‘लिली–बिली’ चलचित्र निर्माण पक्षले आफूसँग पाँच महिनाअघि नै अभिनयका लागि प्रस्ताव गरेको बताउने गरेका छन् । उनले यदि अनमोलसँग पारिश्रमिकमा कुरा नमिलेपछि आफूलाई खेल्न अफर गरिएको भन्दै ‘लिली–बिली’ नखेल्नेसमेत मनस्थिति बनाएको बुझिएको छ ।
‘लिली–बिली’ निर्माण पक्षले प्रदीपले अग्रिम पारिश्रमिक १० लाख रुपैयाँ लगिसकेको जनाए पनि उनले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । प्रदीपले आफूले १० लाख रुपैयाँ अग्रिम नलिएको नजिकका कलाकार र केही सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराएका छन् । अनमोल केसीले भने ‘लिली–बिली’ मा आफूलाई अभिनय गर्न प्रस्ताव आएको र त्यसबारे छलफल भएको जानकारी दिएका छन् । जसले गर्दा अनमोल र प्रदीप दुवैलाई ‘लिली–बिली’ चलचित्र युनिटले खेल्नका लागि प्रस्ताव गरेको पुष्टि हुन्छ । तर, कसलाई पहिले अफर गरिएको हो ? भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
पल शाह र सलिनमानको पनि डिमान्ड बढ्दै
अनमोल र प्रदीपसँगै पल शाह, सलिनमान बानियाँ, आयुष्मान र आशीरमान दाजुुभाइको डिमान्ड बढ्दै गएको छ । पलले खेलेको ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ ले राम्रो व्यापार गरेको छ । अब उनको चाँडै ‘जोनी जेन्टलम्यान’ प्रदर्शन हुँदैछ । ‘चपली हाइट २’ बाट रजतपटमा प्रवेश गरेका आयुष्मान पनि महँगा कलाकार बन्दैछन् । उनी अहिले दुई तीनवटा प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका छन् । उनका भाइ आशीरमानले खेलेको ‘ग्याङस्टार ब्लूज’ यतिखेर प्रदर्शनका क्रममा छ । चलचित्रले शुक्रबार र शनिबार राम्रो व्यापार गरेको बताइएको छ । यस्तै, भदौ १६ गते रिलिज हुने ‘ए मेरो हजुर २’ का नायक सलिनमानप्रति धेरैको चासो छ । कोरियन स्टाइलका मुहार भएका सलिनमानले अभिनय गरेको ‘ए मेरो हजुर २’ का सबै गीत यतिखेर युट्युबमा हिट भएका छन् ।
Tarun Khabar0response बिहिबार,८ भाद्र २०७४ 264 Views
राजेन्द्र, प्रियंका, स्वस्तिमा र साम्राज्ञीको चर्चा
काम गर्ने राजकुमार, जस पाउने निकिता
बुधबार,१७ माघ २०७४